Shina: Ho an’ny fitsingerenan’ny taona nitrangan’ny raharaha Tiananmen, ambany fanarahamaso hentitra ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2018 7:00 GMT
Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka ny May 2009
Raha toa ka manakaiky ny 4 jona, fitsingerenan'ny faha-20 taonan'ny raharaha tao Tiananmen, nakatona ireo (karajia) sehatra firesahana an-tambajotra an'ireo oniversite sinoa (貼巴）, ao amin'ny Baidu (maotera fototra ho an'ny fikarohana sy vavahady anaty Aterineto ao Shina). Nanomboka tamin'ny 23 May, tsy afaka manoratra lahatsoratra vaovao na mamoaka fanehoankevitra intsony ireo mpampiasa. Araka ny hafatra ofisialy tao amin'ny Baidu, mifandray amin'ireo ”lalàna nasionaly” sy ny ”fitsipika fampiasana ny sehatra fifampiresahana” ny fanapahana ny tolotra.
Najanona ilay mpanangona ireo sehatra firesahana an-tambajotran'ireo oniversite
Araka ny Radio France Internationale, nampiakatra ity hafatra fanazavana ity ny karajian'ny oniversiten'i Pékin tao amin'ny Baidu: ”Raiso ny fialantsininay tompoko. Afaka vakiana fotsiny ity karajia ity ankehitriny. Notsoahana ny fahafahana mamoaka hafatra vaovao”. Avy eo izy manazava izy fa noho ny ”fisiana votoaty tsy ara-dalàna izay nandika ny ‘lalàna nasionaly’ sy ireo ‘fitsipika fampiasana’ no antony. Mila manadio ny karajia ny ekipan'ny mpitantan-draharahan'ny karajia . Noho izany, mamaky ihany no azon'ireo mpampiasa aterineto atao, tsy afaka manoratra intsony izy ireo.
Rindrambaiko namboarin'ny Baidu ny ”mpanangona karajia”. Rehefa manoratra teny iray fanalahidy ny mpampiasa, miteraka karajia iray vaovao io rindrambaiko io ho an'ireo mpampiasa liana mikasika io lohahevitra io, ary maniry ny hiresaka izany an-tambajotra.
Ankoatra ny fanidiana ity rindrambaiko ity, manara-maso ny hevitry ny vahoaka ireo vavahadin-tserasera ao amin'ny Aterineto amin'ny alàlan'ny fanakatonana ireo fanehoankevitra.
Milaza ireo sinoa mpampiasa aterineto ankehitriny, amin'ny Twitter sy Fanfou (kambana sinoa amin'ny Twitter), fa ny fanaovana fikarohana ao amin'ny Google miaraka amin'ny teny ”mikatona ireo fanehoankevitra” no fomba tsara indrindra hahitana lahatsoratra mahaliana ao anatin'ity vanim-potoana saropady ity. Nandika lisitra fohy an'ireo lohatenina lahatsoratra izay nakatona ny fanehoankevitra tao aminy avy ao amin'ny tranonkala DANWEI i Joel Martinsen :
-Tombanan'ny Sichuan ho 5 335 ireo mpianatra maty na tsy hita tao anatin'ny horohorontany tao Wenchuan
– Birao fisorohana ny kolikoly: tsy milaza na inona na inona mikasika ny fampiasana volam-bahoaka mba handoavany fialantsasatra any ivelany ry zareo manampahefana.
– Mamaly ireo fanamarihan'ny Filohan'i Etazonia mikasika ny ”Andron'ny fahafahan'ny gazety” ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny.
– Noroahan'ny renin'i Deng Yuqiao tampoka ny mpisolovava azy.
Ambany fanarahamaso hentitra ihany koa ireo vavahadin-tserasera sy karajia tsy miankina kokoa sasany. Nakatona vonjimaika hatramin'ny 5 Jona ny TECN ary nikatona efa hatramin'ny 23 May noho ny famoahana votoaty tsy ara-dalàna ny YenHuang Chunqiu (araka ity lahatsoratry ny RFA ity).